Iindaba-Siyavuyisana ne-11kv kunye ne-33KV yethu yenguqu kunye neevolitha eziguqula uvavanyo lweKEMA
I-KEMA sisifinyezo saseDatshi (uKeuring Van Elektrotechnische Materialen). Ububanzi beshishini le-KEMA buye banda, kwaye baba ligunya elizimeleyo elizimeleyo kushishino lweenkonzo zamandla zehlabathi. Ngaphezulu kweminyaka engama-80, i-KEMA ibinceda abathengi ukuba baqikelele kwicala lotshintsho kunye nokusombulula imiceli mngeni yamandla kunye nezinto eziluncedo. Idlala indima ebalulekileyo ekuqinisekiseni ubukho, ukuthembeka, uzinzo kunye nenzuzo yamandla ehlabathi kunye neemveliso ezinxulumene namandla kunye neenkqubo.
Kwiiprojekthi zeenkonzo ezahlukeneyo, i-KEMA idlala indima yobunjineli, umcebisi ngezamashishini, inkqubo kunye nengcali yolawulo lotshintsho. Ukusuka kubuchwephesha, kulawulo nakwisicwangciso-qhinga solawulo kunye nokucwangcisela uyilo lobunjineli, inkqubo kunye nokuphunyezwa kokusebenza kunye novavanyo, njl.
I-KEMA izinze eArnhem, eNetherlands, inamasebe kumazwe angama-20 kwihlabathi liphela. Ngaphezulu kweminyaka engamashumi asibhozo, umgangatho, ukuthembeka, ukuthembeka kunye nolwazi lobungcali zizinto ezixabisekileyo ze-KEMA.
Inkqubo ye- 11kv kunye 33KV ombane kunye neziguquli zangoku eveliswe ngumzi-mveliso wethu sombane siphumelele uvavanyo lweKEMA kwaye sifumene ingxelo yovavanyo lweKEMA.
Singumenzi wombane eTshayina. Ke, zonke iimveliso zethu zenziwe ngokungqongqo ngokwe-ISO9001 & KEMA, kwaye sithumela kumazwe angaphezulu kwama-30 kwaye banelisekile ngumgangatho wethu nasemva kwenkonzo yokuthengisa.
Ukuba ufuna, ungaqhagamshelana nathi kwiziphumo zovavanyo lweKEMA zotshintsho lwethu kunye nekhathalogu yemveliso.
Sijonge phambili ekusekeni unxibelelwano nawe kunye nokuphuhlisa kunye.
Ixesha Post: Dis-30-2020